Galmo + caado? Dabcan! | På blodigt allvar
Galmo + caado? Dabcan!
Caadada looma baahna inay caqabad ku noqoto galmada iyo seegeysiga – dumarka qaarkood kacsi dheerad ah ayey dareemaan xilliga caadada.
Jir ahaan ma jiraan wax habayaraatee hor taagan in la galmoodo marka caado ay jirto. Adiga ahaan ama qof kale ahaan toona. Caadada ka hor ama muddada ay jirto, haddaad ku dhibban tahay murqo kogid, aad dareemeyso murugo ama madluunsanaan galmadu runtii marmar wey ku caawimi kartaa, waayo waxay fasaxdaa hoormoono xaaladdaada wax-xoogaa wanaajiya. Waa laga yaabaa inay habboon tahay in la tijaabiyo seegeysi ama galmo. Si kastaba ha ahaatee, haddaadan niyad u haynin galmo, raac niyaddaada!
Dumarka qaar ayaa kacsi dheeraad ah dareema markay caadadu ku dhacdo, tasina laga yaabee inuu lug ku leeyahay isbeddelka heerarka hoormoonnada. Dumarka qaar waxay sidoo kale u arkaan inuu kordho dareenka xubinta taranka iyo siilka, oo ay si gaar ah ugu nugul yihiin kicinta. Dumarka kalese waxay caadadu ku keentaa dareen dheeraad ah ama inay u doorsoomaan hab ah inay galmada dhibsadaan. Dumarka kacsigooda caadadu haboyaraatee kuma laha wax saamayn ah.
Say u galmood
Marka qof dumar ah loo galmoonayo intay caadadu jirto waxaa ugu muhiimsan in xaladdaas laga sii wada hadlo. Dadku wey ku kala duwan yihiin fikradaha ay ka qabaan israaca galmada iyo caadada, waana wanaagsan tahay in taas galmada ka hor la isku sheego. Marmar waxaa dhacda in aqoondarri darteed aysan dadku u arag, in caadadu ay tahay wax dabiici u ah jir caafimaad qaba. Dhiigga caadadu kama wasaqsana, kamana qatarsana dheecaan kale. Si kastaba ha noqotee, qaar ayaa weli si xooggan uga falceliya aragtida ama dareenka dhiigga iyagoo tusaale ahaan ay u sawirmayaan dhaawac iyo wax la mid ah.
Haddii adigoo caado leh aad sameyneyso galmo gus iyo sill isdhex galay ah waxay u badan tahay inaadan uur qaadi doonin, maadaama ay dhici karto in maalmo badan ay kaa xigaan xilliga ugxanaynta. Waxaase jira xaalado taas ka duwan. Haddaad leedahay meerto-caado gaaban (21-24 cisho) oo aad galmo sameyso dhammaadka xilligaas, waxaa laga yaabaa inay unugyada xawadu siilka ku sii noolaadaan ilaa iyo shan cisho oo hor leh, in uur la qaado ayaa markaas suurogal ah.
Haddii galmo lagu xanuunsanayo
Xanuunnada qaarkood sida tusaale ahaan endometriosiska* iyo caado-xanuunka xooggan waxay marka la sameynayo galmada juqjuqeynta/isgeliska ah dhaliyaan xanuun dheeraad ah. Xanuunka waxaa la dareemi karaa inta lagu jiro xilliga galmada iyo ka dibba. Marmar wuxuu xanuunku waari karaa laga billaabo dhawr saacadood ilaa iyo dhawr maalmood galmada ka dib. In galmo lagu xanuunsado sababo kala duwan ayey yeelan kartaa, tusaale ahaan jugeynta xooggan ama kala baxa. Sababta kale waxey noqon kartaa qallaylka siilka oo ay daawo la qaadanayey ugu wacan tahay, markaas subkid ayaa xal noqon kara.
Aad iyo aad ayey muhiim u tahay inaad saygaaga xanuunka galmada kala hadashid.
Haddaad ku xanuunsaneyso galmada isgeliska ah habab kale ayaad tijaabin kartaa, isku day inaadan gudaha dheer u galin siilka, isdejisid oo aad bal fiirisid inay xaaluduhu hagaagaan. Waxaad iyana akhrisan kartaa macluumaad ku saabsan festibulit iyo faginiisim oo labadaba keena in galmada lagu xanuunsado.
Aad iyo aad ayey muhiim u tahay inaad saygaaga xanuunka galmada kala hadashid. Isku day inaad uga sii digto inaad xanuunsaneyso, oo u soo jeedi habab kale oo la isugu galmoodo. Waxaa jira habab kala duwan oo badan oo la isugu galmoodo oo kuu hagaagi kara, tusaale ahaan: daliigid macaan, galmo salsalaax, galmo marmarin iyo galmo af!
*Endometriosis: cudur xuub-axaleedka ilmagaleenku uu ku sameysmo meelo ka baxsan ilmagaleenka. Cudurku wuxuu dhalin karaa xanuun, xilliga caadada iyo ka dibba.
Last updated 05/10/2019 - 11:21
Meerto caado iyo xaalad dhimir
Marka uu xanuun ku xannibo